Google wuxuu soo bandhigayaa Nexus cusub iyo kiniinka Pixel C | Wararka IPhone
Google wuxuu soo bandhigayaa Nexus cusub, Chromecast 2 iyo Chromecast Audio
Maanta markay ahayd 18:00 pm ayaa waxaa bilaabmay shirkii Google kaas oo lagu soo bandhigi doono taxane ah alaabooyin cusub, wax la mid ah Muhiimadii ugu dambeysay ee Apple ay bixisay 9-kii September. Kuwa ugu xiisaha badan waxay ahaayeen Nexus 5X cusub iyo Nexus 6P, oo faahfaahin dheeri ah horey loo ogaa, marka lagu daro mid kaliya maahan laakiin labo Chromecasts cusub ayaa la soo bandhigay, Chromecast 2 oo ah isbedel kii hore iyo Chromecast Audio, oo loogu tala galay oo kaliya sii deynta codka, oo leh qiimo ka jaban. Ugu dambeyntiina shirkadda Google ayaa soo bandhigtay kiniinka Pixel C oo ah kiniin ay shirkadda Google qorsheyneyso inay kula tartanto shirkadda Microsoft ee Microsoft iyo shirkadda Apple ee iPad Pro. Ipad Actualidad waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan wararka.
1 Pixel C, tartan loogu talagalay iPad Pro
2 Nexus 5X, oo ah walaalka ka weyn Nexus 5
3 Nexus 6P, Android-dhamaadka sare
4 Chromecast 2 iyo Chromecast Audio
Pixel C, tartan loogu talagalay iPad Pro
Google Pixel C wuxuu ku yimaadaa qalab 10,2-inch shaashad ah oo umuuqda mid yar, si aad ufiican oo xalkeedu yahay 2560 × 1800 pixels, oo wadarta cufnaanta 308 pixels halkii inji. Intaa waxaa dheer, waxaa laga sameyn doonaa gebi ahaanba bir, oo leh jir unibody ah. Taabashada nimcada leh waxaa bixiya khadka midabada kala duwan ee aan horay ugu arki karnay Pixelbook Pixel.
Gudaha waxaan ka heli doonnaa qalab xiiso leh, oo leh un processor-quad-core oo ay bixiso N-VIDIA, oo loo yaqaan 'NVIVIDIA X-1', oo gacanta ugu jira Maxwell GPU caan ah iyo 3 GB oo LPDDR4 RAM ah oo ballan qaadaya waxqabad aad u fiican. Isku-darka nidaamka hawlgalka Android iyo dhumuc aan u muuqan mid soo jiidasho leh, waa inaan sheegnaa inaysan soo bandhigin wax muuqaal ah oo ka dhigaya inay si muuqata u muuqdaan. $ 499 oo loogu talagalay nooca 32GB iyo boqol doolar oo dheeraad ah oo loogu talagalay nooca 64GB oo haddii aan xisaabta ku dareyno in kumbuyuutarka si gooni ah loo iibinayo $ 149 waxaan wali raadineynaa soo jiidashada kiniinkan.
Nexus 5X, oo ah walaalka ka weyn Nexus 5
Terminal udub dhexaad sare ah oo soo bandhigaya shaashad 5,2-inji ah oo leh xallinta 1080p, oo ku saabsan 420 pixels halkii inch ee guddi IPS ah, oo uu ku daboolan yahay Gorilla Glass 3. Shirkadda soo saareyaasha LG ayaa leh dhammaadka balaastigga leh unibody, oo lagu heli karo midab cad, buluug iyo madow.
Miisaanka waa fudud yahay, kaliya 136 garaam iyo dhumucdiisuna tahay 8mm oo ay wehliso 14,7 sentimitir dheer iyo 7,2cm balac ah, yar xaqiiqdii maahan Laakiin waxa muhiimka ahi waa gudaha, a Processor Qualcomm 808 oo leh 64Bits technology iyo lix xudun oo 2 GHz ah.Ka hadal GP-ga, waxay doorteen Adreno 418 iyo 2 GB oo DDR3 ah oo si fiican loo yaqaan, iyadoo ay suuragal tahay in la doorto kaydinta 16 GB ama 32 GB iyadoon suurtagal ahayn in la ballaariyo.
Kaamiradu waa 12,3 MP, oo leh f2.0 aperture, laba laydh LED ah, iyo qabashada fiidiyaha 4K. Dhanka hore, kamarad 5 MP ah oo caadi ah ayaa la xushay. Kaamirada gadaal waxay sawiro fiican ka qaadataa xaaladaha iftiinka yar waxaana weheliya xasiliyaha muuqaalka muuqaalka. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah sheekooyinka ugu waaweyni waa akhristaha faraha ee dhabarka qalabka iyo nooca Android 6.0. La heli karo laga bilaabo $ 379 gudaha Mareykanka laga bilaabo maanta, iyadoo la saadaalinayo ballaarinta.
Nexus 6P, Android-dhamaadka sare
Iyada oo Nexus 6P ay samaysay shirkadda Huawei, Google waxay doonaysay inay samayso qalab heer sare ah. Waxaa lagu dhisay aluminium iyo culeyskeedu yahay 178 garaam iyo cabirkiisuna yahay 159,4 x 77,8 x 7,3 milimitir, waa la aruuriyay haddii aan ka hadalno qalab 5,7 inji ah. Xallinta guddi-hoosaadkeeda IPS sidoo kale waa mid aad u wanaagsan, dayactirka 2560 x 1440 pixels iyo soo bandhigida uumiga 515 pixels halkii inji.
Sida gudaha, waxay qarineysaa Qualcomm Snapdragon 810 v.2.1 oo leh tayo iyo awood la xaqiijiyay, gacanta ku haya 3GB RAM oo ka dhigaya mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee Android. Kaamiradu ma yaraan karto, 12,3 MP oo leh laba-midab flash iyo laser sensor oo noo balan qaadaya sawirada ugu fiican.
Waxaas oo dhan waxay leedahay batari aan ka yarayn 3.450 Mah iyo laba af-haye oo afka hore ku hadla. Kaydinta waxay u dhaxeysaa 32GB illaa 128GB, oo aan la ballaarin karin. Laakiin tan ugu xiisaha badan waxay umuuqataa inay tahay USB-C 2.1 dekedda kuleylka leh oo si deg deg ah uxiraneysa, waxay umuuqataa in Apple uu lasaaray USB-C. The qiimaha wuxuu ka bilaabmayaa $ 499 nooca 32Gb, $ 549 qaybta 64Gb iyo $ 649 qaybta 128Gb.
Chromecast 2 iyo Chromecast Audio
Usha Google ee HDMI ayaa dib loogu cusbooneysiiyay naqshadeynta ku dhowaad sida keychain, sidaa darteed waxay kusii nagaaneysaa si joogto ah HDMI ee aan ku xirno. Waxay hadda leedahay 802.11 ac Wi-Fi isku xirnaanta, iyada oo lagu darayo tiro badan oo kooxo ah. Dabcan, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in hadda uu yahay la jaan qaada waxyaabaha ku jira xalka 1080p isla waqtigaasna Chromecast App ayaa la cusbooneysiiyay. Qiimaha waxaa lagu hayaa 17ka dal ee iibka ah, 39 euros, oo horeyba loogu iibiyaa Google Store.
Chormecast Audio qaybteeda ayaa ah nooca Chromecast loogu talagalay kaliya in codka laga sii daayo Wi-FiWaxaan si fudud ugu dhejineynaa mahadsaniddeeda 3,5mm jack, in kasta oo ay iyaduna leedahay wax soo saar indhaha ah. Chromecast Audio hadda waxaa lagu heli karaa qiimo la mid ah Chromecast 2 oo ku yaal Google Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Google wuxuu soo bandhigayaa Nexus cusub, Chromecast 2 iyo Chromecast Audio
Uma arko wax ku cusub Chromecast 2 iyo Chromecast Audio, tan koowaad waxay ku horumarin karaan astaamaha qaar heerka qalabka, laakiin khibrada isticmaale aan lahayn hago hago fog ayaa wali dhiman, iyadoo loo furaayo kiniinka ama taleefanka gacanta si si faahfaahsan ugu sii daa filim ama ka baaraandegista CC 2 xulashooyinka laguma talinayo. Marka laga hadlayo CC Audio, waxaa jira ikhtiyaarro kale oo aad isugu dhow ama ka sii dhammaystiran, sida Dlink Audio Extender (DCH-M225) oo, marka lagu daro taageerida qulqulka, sidoo kale ah soo noqnoqda Wi-Fi signal, kaas oo u oggolaanaya ballaarinta shabakadda caymiska.
Ku jawaab astatus
Kaliya Mobile AluFrame iPhone 6 Plus Dib u Eegid Kiis
iPhone 6s: tani waxay ahayd isbeddelka kamaradda iPhone-ka